जीवन के हो ? मृत्युपछिकाे यात्रा के हुन्छ ? बुद्ध यसो भन्छन्… - Mitho Khabar
June 21, 2021 Mitho KhabarLeaveaComment on जीवन के हो ? मृत्युपछिकाे यात्रा के हुन्छ ? बुद्ध यसो भन्छन्…
एकपटक गौतम बुद्ध आफ्ना शिष्यका साथ संवादमा व्यस्त थिए । उनीहरू बुद्धसित अनेक प्रश्न सोधिरहेका थिए । बुद्ध पनि यथोचित उत्तर दिएर उनीहरूको जिज्ञासा शान्त बनाइरहेका थिए । यसै क्रममा एक शिष्यले उनलाई सोधे– भगवान्, तपाईंले आजसम्म हामीलाई धेरै कुराको ज्ञान दिएर बाटो देखाउनुभएको छ । तर, हजुरले आजसम्म हामीलाई मानिसको मृत्युपश्चात् के हुन्छ भन्ने विषयमा केही पनि भन्नुभएको छैन ।
शिष्यको जवाफ सुनेपछि बुद्धले भने– तिमीले ठीक भन्यौ । अब तिमी मलाई अर्को एउटा प्रश्नको जवाफ देऊ । हामीले सबैभन्दा पहिले यस जीवनका दुःखको निवारणको उपाय खोज्नु ठीक हुन्छ कि मृत्युपछि के हुन्छ भनेर टाउको दुखाउनु ठीक हुन्छ ? बुद्धको प्रश्न सुनेपछि शिष्यको जिज्ञासा शान्त भयो
वीरगञ्ज–रक्सौल नाकामा अलपत्र परेका भारतीयलाई युवासंघले बाढ्याे खाद्यान्न